Le yindlela iVenkile entsha yeApple eSingapore ebonakala ngayo | Ndisuka mac
Ngomso lusuku olukhethwe yiApple ukuvula iVenkile yokuqala yeApple eSingapore, iVenkile yeApple efumene ukulibaziseka okuninzi kwiinyanga ezidlulileyo kodwa, njengoko besikwazisa ngeentsuku zakutshanje, izakuvula iingcango zayo kuluntu ngomso . Kwangoko kule veki uApple wasusa iivinyl ezazigubungele zonke iivenkile zevenkile, eveza uyilo lweVenkile entsha yeApple kunye nemigangatho emibini eyenza le venkile intsha. Umgangatho wesibini uya kuba ngulowo umiselwe yi-Apple ukwenza iikhosi zoqeqesho ezihlala zithatha ezivenkileni zakhe.
I-CNET ipapashe usuku ngaphambi kokuvulwa ngokusesikweni kweefoto ezintsha zevenkile entsha, iifoto apho utshintsho lwezixhobo ezisetyenziswa yiApple ukwenza isinyuko esinyukayo ukuya kumgangatho ophezulu siyabetha, isitepsi sokuba kude kube ngoku yenziwe ngeglasi, Ngelixa ngoku i-marble zizinto ezibonakalayo, zombini emgangathweni nakumacala ezinyuko. Olu luyilo olunye u-Apple aqala ngalo kwiVenkile ye-Apple yaseNanjing e-China kwaye ngokwamahemuhemu amva nje iyakusetyenziswa kulungiso lweFifth Avenue Apple Store.
Kweminye yemifanekiso sinokubona igumbi lokuhlangana elisetyenziswa nguApple ukuqokelela abasebenzi balo kwaye ngamanye amaxesha abanye abathengi beshishini, igumbi lokuhlangana elingafane libonwe kwiifoto ezininzi. Ukuba sijonga emacaleni egumbi lokuhlangana, siyabona ukuba imifanekiso / iifoto ezimbini zeApple Park zihombisa njani izibonelelo. Ngomso kusasa nge-10 kusasa ngexesha lendawo, i-Apple izakuvula iVenkile entsha ye-Apple kwaye abafana baseCupertino basinika iifoto kunye neevidiyo kule venkile intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Yile nto ivenkile entsha yeApple eSingapore ijongeka ngayo
Hlela iifayile zakho zePDF ngePD ConverterCOC 4, ngoku iyathengiswa